Fanaanada Fatima Haryan oo kamaseertay fanaanada cusub ee Iqro Cadeey Daawo Video-ga - iftineducation.com
Fanaanada Fatima Haryan oo kamaseertay fanaanada cusub ee Iqro Cadeey Daawo Video-ga
aadan21 / May 31, 2012
iftineducation.com – Fatima Haryan ayaa ah fanaanad caan ka ah cariga Kenya, fanaanadani waxey kamid tahay fanaaniintii soo shaac baxay xili dhow, dadka xiiseeyo arimaha fanka Fatima haryan waxey kuxasuustaan heestii aheyd nafyahay.
Mudooyinkii ugu danbeeyay waxaa fanka kusoo biirayay fanaaniin aad u da’yar kuwaasoo cod dahabi ah lasoo shaac baxayay, halka qaarna fanka uun xiiseynayeen balse wax cod ah aaysan lasoo shir tagin.
Xaflad ka dhaceysay magaalada Nairobi ayaa waxaa iskugu yimid faniin aad u faro badan oo aay ka mid aheyd Fanaaniinta Fartuun Cumar oo ka qaaday heestii Isoo Jaceel iyo Gabar Ugub Ayaan Ahay, Iqro Oo ka qaaday heestii wadnaha, Axmed Qoomaal Yare oo ka qaaday heeskii Hiiraan, iyo Fatima Haryan oo ka qaaday heestii aheyd inanyahoow, iyo Weliba Fanaanka Iidle Yare oo asigana ka qaaday heeskii Hibo.
Balse arinta filan waaga ah ee goobta ka dhacday ayaa aheyd in Fatima haryan aay ka maseyrtay fanaanada da’da yare e Iqro, fanaanada Fatima haryan waxey ka mid aheyd dadkii daawanayay heeska cusub ee aay qaadeysay fanaanada iqro, balse Fatima haryan ayaa is celin waaysay heesta macaanteeda iyo codka xabeebta kularantahay ee aay kusoo bandhigeysay fanaanada iqro.
Fatima haryan ayaa ka istaagtay goobtii aay ka socotay heesta waxey u dhaqaaqday dhankaasi iqro ayadoo inyar inteey la istaagtay dabadeed markii aay kasii tageysay far iyo suul ku qabatay kana riday iqro garbasaar yariis ah oo usaarnaa garbaha, kaasoo aay isku mashquulineysay markii aay heeska qaadeysay, maadaama aay kucusubtahay masraxa,.
Fatima haryan uma suurto gelin qorshaheedii ahaa in aay ku foos wareeriso arinkaasi durbadiiba markii aay ka riday waxaa soo istaagay inan kamid ahaa ka qeyb galayaasha bandhig faneedkaasi, inta uu dhulka kazoo qaaday ayuu usaaray garbaha, durbo iqro ayaa dareentay oo ayadoo heesta wado inta inankii fiirisay dhexdana kudhagtay, kadib waxaa shakiga dhaliyay fatima haryan markeey intaasi aragtay ayey banaanka ugu baxday goobtii bandhig faneedka kasocday.
Iqro ayaa lasoo baxday heesta 2012 ee Wadnaha iyo Weliba cod xabeebi ku larantahay oo aad u mac taasina waxey keeneysaa in fanaaniinta dumarka ahi durbo kamaseeraan codkeeda mucjisada ah.
Xigasho : Jaceylka.
Mucaashiqiin Soomaaliyeed oo aad isku jeclaa, oo ay dhex martay arin layaab leh
Alla waan ku Jeclahay Maxaa Sidaan iigu Galaysaa miyaadan Naxariis laheyn”Dhacdo aad la ilmeyn doonto”